1, 2. (a) Roorano yakagadzirirwa kugara kwenguva yakareba sei? (b) Ikoku kunobvira sei?
APO Mwari akabatanidza murume wokutanga nomukadzi muroorano, kwakanga kusina chiratidzo chokuti mubatanidzwa wacho waizongova wechinguvana bedzi. Adhama naEvha vaifanira kuva pamwe chete kwoupenyu hwose. (Genesi 2:24) Mupimo waMwari weroorano inokudzwa kubatanidzwa kwomunhurume mumwe nomunhukadzi mumwe. Utere hwevatano hwakakomba bedzi hwomukwanyina mumwe kana kuti vose vari vaviri hunogovera zvikonzero zvapaMagwaro zvechatanuro nebviro yokuroorazve kana kuti kuroorwazve.—Mateo 5:32.
2 Kunobvirira here vanhu vaviri kugara pamwe chete nomufaro kwenguva refu isingazivikanwi? Hungu, uye Bhaibheri rinozivisa zvinhu zviviri zvinokosha, kana kuti kiyi, izvo zvinobetsera kuita kuti ikoku kuve kunobvira. Kana vose vari vaviri murume nomudzimai vakashandisa izvozvo, vachakiyinura suo rokumufarwa nezvikomborero zvakawanda. Chii chiri idzi kiyi?
3. Marudzii matatu orudo anofanira kusakurirwa muvakwanyina veroorano?
3 Kiyi yokutanga rudo. Nenzira inofadza, kune marudzi akasiyana-siyana orudo anoziviswa muBhaibheri. Rumwe chidakadaka, choushamwari chomunhu oga nokuda kwomumwe munhu, rudzi rworudo runovapo pakati peshamwari dzapedyo. (Johane 11:3) Rumwe rudo runokura pakati pemitezo yemhuri. (VaRoma 12:10) Rwechitatu rudo rwenyengano urwo munhu anogona kuva narwo nokuda kwomutezo une mitezo yevatano yakasiyana. (Zvirevo 5:15-20) Chokwadika, ose iwaya anofanira kusakurirwa nomurume nomudzimai. Asi kune rudzi rwechina rworudo, runokosha zvikuru kupfuura mamwe.
4. Ndorwupi rwuri rudzi rwechina rworudo?
4 Mumutauro wapakuvamba waMagwaro echiGiriki echiKristu, shoko rorudzi urwu rwechina rworudo ndia·gaʹpe. Shoko iroro rinoshandiswa pana 1 Johane 4:8, apo tinoudzwa, kuti: “Mwari rudo.” Zvirokwazvo, “isu tinoda, nokuti [Mwari] wakatanga kutida.” (1 Johane 4:19) MuKristu anosakurira rudo rwakadaro kutanga nokuda kwaJehovha Mwari uye ipapo nokuda kwavanhu biyake. (Marko 12:29-31) Shoko rokuti a·gaʹpe rinoshandiswawo pana VaEfeso 5:2, iyo inorava, kuti: “Fambai murudo, Kristu sezvaakakudaiwo, akazvipa nokuda kwedu.” Jesu akataura kuti rudzi urwu rworudo rwaizozivisa vateveri vake vechokwadi: “Vose vachaziva naizvozvi kuti muri vadzidzi vangu, kana mune rudo [a·gaʹpe] pakati penyu.” (Johane 13:35) Cherekedzawo kushandiswa kwaa·gaʹpe pana 1 VaKorinte 13:13: “Zvino kutenda, netariro, norudo, zvitatu izvi, ndizvo zvinogara; asi chikuru pakati pazvo ndirwo rudo [a·gaʹpe].”
5, 6. (a) Neiko rudo rwuri rukuru zvikuru kupfuura kutenda netariro? (b) Ndezvipi zviri zvimwe zvikonzero nei rudo ruchabetsera kuita kuti roorano igare?
5 Chii chinoita kuti rudo urwu rwaa·gaʹpe ruve rukuru zvikuru kupfuura kutenda netariro? Runodzorwa nenheyo—nheyo dzakarurama—dzinowanwa muShoko raMwari. (Pisarema 119:105) Kuitira hanya kusina udyire kwokuitira vamwe chakarurama nechakanaka mumurangariro waMwari, mugamuchiri angave achiratidzika kuva akafanirwa nako kana kuti kwete. Rudo rwakadaro runogonesa vakwanyina veroorano kutevera zano reBhaibheri: “Muitirane mwoyo murefu, muchikanganwirana, kana munhu ane mhosva nomumwe; Ishe sezvaakakukanganwirai, muite saizvozvo nemiwo.” (VaKorose 3:13) Varoorani vanodana vane rudo uye vanosakurira “rudo [a·gaʹpe] rukuru nokuda [kwomumwe nomumwe], nemhaka yokuti rudo runofukidza zvivi zvizhinji.” (1 Petro 4:8, NW) Cherekedza kuti rudo runofukidza zvikanganiso. Haruzvibvisi, sezvo kusina munhu asina kukwana anogona kuva asina mhosho.—Pisarema 130:3, 4; Jakobho 3:2.
6 Apo kuda Mwari kwakadaro uye kuda mumwe nomumwe kunosakurirwa navaroorani, roorano yavo ichagara ndokufadza, nokuti “rudo harutongokundikani.” (1 VaKorinte 13:8, NW) Rudo “chisungo chakakwana chomubatanidzwa.” (VaKorose 3:14, NW) Kana wakaroora kana kuti kuroorwa, unogona sei nomukwanyina wako kusakurira urwu rudzi rworudo? Ravai Shoko raMwari pamwe chete, uye taurai pamusoro paro. Fundai muenzaniso waJesu worudo ndokuedza kumutevedzera, kufunga nokuita saiye. Mukuwedzera, pindai misangano yechiKristu, uko Shoko raMwari rinodzidziswa. Uye nyengetererai betsero yaMwari yokukudza urwu rudzi rukuru rworudo, urwo rwuri chibereko chomudzimu waMwari.—Zvirevo 3:5, 6; Johane 17:3; VaGaratia 5:22; VaHebheru 10:24, 25.
7. Ruremekedzo chii, uye ndiani anofanira kuratidza ruremekedzo muroorano?
7 Kana vanhu vaviri vakaroorana vachidana chaizvoizvo, ipapo vacharemekedzanawo, uye ruremekedzo ndiyo kiyi yechipiri yeroorano inofadza. Ruremekedzo runorondedzerwa so“kupa rangariro kuvamwe, kuvakudza.” Shoko raMwari rinopa zano vaKristu vose, kubatanidza varume navadzimai, kuti: “Mukuratidza rukudzo kune mumwe nomumwe tungamiriranai.” (VaRoma 12:10, NW) Muapostora Petro akanyora, kuti: “Imi varume, pfuurirai kugara nomutoo wakafanana na[vadzimai venyu] maererano nokuziva, muchivapa rukudzo sokumudziyo usina simba, iye munhukadzi.” (1 Petro 3:7, NW) Mudzimai anopiwa zano roku“remekedza zvikuru murume wake.” (VaEfeso 5:33, NW) Kana uchida kukudza mumwe munhu, une mutsa kumunhu iyeyo, unoremekedza chiremera chomunhu iyeyo nemirangariro inotaurwa, uye wakagadzirira kuita chikumbiro chipi nechipi chine mufungo chinoitwa kwauri.
8-10. Ndedzipi dziri dzimwe nzira idzo ruremekedzo ruchabetsera nadzo kuita kuti mubatanidzwa weroorano uterame uye ufadze?
8 Avo vanoda kufarikanya roorano inofadza vanoremekedza vakwanyina vavo kupfurikidza nokuti “mumwe nomumwe ngaarege kutarira zvake, asi nga[va]tarire [zvavakwanyina vavo].” (VaFiripi 2:4) Havasati vachirangarira chakangovanakira ivo vamene bedzi—uko kungava udyire. Panzvimbo pezvo, vanorangarira zvakanakisisawo nokuda kwavakwanyina vavo. Zvirokwazvo, vanopa izvozvo nzvimbo yokutanga.
9 Ruremekedzo ruchabetsera vakwanyina veroorano kubvuma misiyano mumirangariro. Hakuna mufungo kukarira vanhu vaviri kuva nemirangariro yakafanana pachinhu chiri chose. Chingava chinokosha kumurume chingasava chinokosha kumudzimai, uye icho mudzimai anoda chingasava icho murume anoda. Asi mumwe nomumwe anofanira kuremekedza mirangariro nezvisarudzo zvomumwe, chero bedzi izvozvi zviri mukati memiganhu yemitemo yaJehovha nenheyo. (1 Petro 2:16; enzanisa naFiremoni 14.) Uyezve, mumwe nomumwe anofanira kuremekedza chiremera chomumwe kupfurikidza nokusaita iyeyo nyajambwa wamashoko anoderedza kana kuti majee, pangava pachena kana kuti pachivande.
10 Hungu, kuda Mwari uye mumwe nomumwe nokuremekedzana ikiyi mbiri dzinokosha dzeroorano inobudirira. Dzinogona sei kushandiswa mudzimwe dzenzvimbo dzinokosha zvikuru dzoupenyu hweroorano?
UMUSORO HWAKAFANANA NOHWAKRISTU
11. Nenzira yapaMagwaro, ndiani ari musoro muroorano?
11 Bhaibheri rinotiudza kuti murume akasikwa ane mavara aizomuita musoro wemhuri unobudirira. Saakadaro, murume aizova nomutoro pamberi paJehovha nokuda kwegarikano yomudzimu neyomuviri yomudzimai wake navana. Aizofanira kuita zvisarudzo zvakadzikama izvo zvinoratidzira kuda kwaJehovha ndokuva muenzaniso wakanaka womufambiro woumwari. “Imi vakadzi, muzviise pasi pavarume venyu chaivo, sezvamunoita kunaShe. Nokuti murume musoro womukadzi, saKristuwo musoro wekereke.” (VaEfeso 5:22, 23) Zvisinei, Bhaibheri rinotaura kuti murumewo ane musoro, Uyo ane chiremera paari. Muapostora Pauro akanyora, kuti: “Ndinoda kuti muzive kuti musoro womumwe nomumwe ndiye Kristu; uye musoro womukadzi ndiye murume; uye musoro waKristu ndiye Mwari.” (1 VaKorinte 11:3) Murume akachenjera anodzidza nzira yokushandisa nayo umusoro kupfurikidza nokutevedzera musoro wake amene, Kristu Jesu.
12. Muenzanisoi wakaisvonaka Jesu akagadza mose muri muviri mukuratidza kuzviisa pasi nomukushandisa umusoro?
12 Jesuwo ane musoro, Jehovha, uye anozviisa pasi Pake nenzira yakafanira. Jesu akati: “Handitsvaki kuda kwangu, asi kuda kwowakandituma.” (Johane 5:30) Muenzaniso wakaisvonaka zvakadini! Jesu ndiye “dangwe rezvisikwa zvose.” (VaKorose 1:15) Iye akava Mesiya. Iye aifanira kuva Musoro weungano yevaKristu vakazodzwa uye Mambo akasarudzwa woUmambo hwaMwari, pamusoro pengirozi dzose. (VaFiripi 2:9-11; VaHebheru 1:4) Pasinei zvapo nenzvimbo yakakwirira yakadaro nekariro dzakakwirira zvakadaro, munhu Jesu akanga asina hasha, asiri akaoma, kana kuti anonyanyorayira. Akanga asati ari mudzvinyiriri, achiyeuchidza nguva dzose vadzidzi vake kuti vaifanira kumuteerera. Jesu akanga ane rudo uye achinzwira tsitsi, zvikurukuru vaidzvinyirirwa. Iye akati: “Uyai kwandiri, imi mose makaneta, makaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Muise joko rangu pamusoro penyu, mudziidze kwandiri; nokuti ndiri munyoro, ndine mwoyo unozvininipisa, kuti muwane zororo pamweya yenyu. Nokuti joko rangu rakanaka, nomutoro wangu unorerukira.” (Mateo 11:28-30) Wakanga uri mufaro kuva naye.
13, 14. Murume ane rudo achashandisa sei umusoro hwake, mukutevedzerwa kwaJesu?
13 Murume anoshuva upenyu hwemhuri hunofadza anoita zvakanaka kurangarira mavara akaisvonaka aJesu. Murume akanaka haana hasha uye haadzvinyiriri, haashandisi zvisakarurama umusoro hwake setsvimbo yokurovesa mudzimai wake. Panzvimbo pezvo, anomuda uye anomukudza. Kana Jesu akanga ane “mwoyo unozvininipisa,” murume anotova nechikonzero chikuru chokuva akadaro nemhaka yokuti, kusafanana naJesu, anoita zvikanganiso. Apo anodaro, anoda nzwisiso yomudzimai wake. Naizvozvo, murume anozvininipisa anobvuma zvikanganiso zvake, kunyange zvazvo mashoko okuti, “ndine urombo; wanga wakarurama,” angava akaoma kutaura. Mudzimai achakuwana kuri nyore zvikuru kuremekedza umusoro hwomurume ane mwero naanozvininipisa kupfuura uhwo hwaanodada neane chisimbwa. Uyewo, mudzimai anoremekedza anokumbirawo ruregerero apo anoita mhosho.
14 Mwari akasika mukadzi ane mavara akaisvonaka ayo anogona kushandisa mukubetsera kuva neroorano inofadza. Murume akachenjera achaziva ikoku uye haasati achizomudzvinyirira. Vakadzi vakawanda vane tsitsi huru zvikuru nokutapurika, mavara anodikanwa mukutarisira mhuri nomukutsigira ukama hwavanhu. Kazhinji kazhinji, mukadzi ane unyanzvi zvikuru mukuita kuti musha uve nzvimbo inofadza yokugara. “Mukadzi unoita zvakanaka” anorondedzerwa muna Zvirevo ganhuro 31 aiva namavara akawanda anoshamisa nounyanzvi hwakaisvonaka, uye mhuri yake yaibetserwa zvizere nazvo. Neiko? Nemhaka yokuti mwoyo womurume wake uno“mutenda.”—Zvirevo 31:10, 11.
15. Murume anogona sei kuratidzira mudzimai wake rudo rwakafanana norwaKristu noruremekedzo?
15 Mudzimwe tsika, chiremera chomurume chinonyanyosimbiswa, zvokuti kunyange kumubvunza mubvunzo kunorangarirwa kuva kusaremekedza. Angabata mudzimai wake kudokufanana nomuranda. Kushandiswa kusina kururama kwakadaro kwoumusoro kunoguma noukama hwakashata kwete bedzi nomudzimai wake asiwo naMwari. (Enzanisa na1 Johane 4:20, 21.) Kune rumwe rutivi, vamwe varume vanoregeredza kutungamira, vachirega vadzimai vavo vachidzora mhuri. Murume anozviisa pasi paKristu nenzira yakafanira haashandisi mudzimai wake zvisakafanira kana kuti kumutorera chiremera. Panzvimbo pezvo, anotevedzera rudo rwokuzvibayira rwaJesu uye anoita seizvo Pauro akapa zano, kuti: “Imi varume, idai vakadzi venyu, Kristu sezvaakadawo kereke, akazvipa nokuda kwayo.” (VaEfeso 5:25) Kristu Jesu aida vateveri vake zvikuru kwazvo zvokuti akavafira. Murume akanaka achaedza kutevedzera chimiro chendangariro ichocho chisina udyire, achitsvaka zvakanaka zvomudzimai wake, panzvimbo pokumurayira. Apo murume anenge ari pasi paKristu uye achiratidzira rudo noruremekedzo zvakafanana nezvaKristu, mudzimai wake achasundwa kuzviisa pasi pake.—VaEfeso 5:28, 29, 33.
KUZVIISA PASI KWOMUDZIMAI
16. Mavarai ayo mudzimai anofanira kuratidzira muukama hwake nomurume wake?
16 Nguva yakati pashure pokunge Adhama asikwa, “Jehovha Mwari akatizve: Hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga; ndichamuitira mubatsiri wakamukwanira.” (Genesi 2:18) Mwari akasika Evha so“wakamukwanira,” kwete somukwikwidzi. Roorano yakanga isati ichizova yakafanana nengarava ine makaputeni maviri anokwikwidzana. Murume aifanira kushandisa umusoro hune rudo, uye mudzimai aifanira kuratidzira rudo, ruremekedzo, uye kuzviisa pasi kwokudisa.
17, 18. Ndedzipi dziri dzimwe nzira idzo mudzimai anogona nadzo kuva mubetseri chaiyeiye kumurume wake?
17 Zvisinei, mudzimai akanaka anopfuura kungozviisa pasi chete. Iye anoedza kuva mubetseri chaiyeiye, achitsigira murume wake muzvisarudzo zvaanoita. Chokwadika, ikoko kuri nyore zvikuru nokuda kwake apo anobvumirana nezvisarudzo zvake. Asi kunyange apo anenge asati, tsigiro yake yokushingaira inogona kubetsera chisarudzo chake kuva nomugumisiro unobudirira zvikuru.
18 Mudzimai anogona kubetsera murume wake kuva musoro wakanaka mudzimwe nzira. Iye anogona kutaura kuonga nhamburiko dzake mukutungamirira, panzvimbo pokumutsoropodza kana kumuita kuti anzwe kuti haagoni kutongomugutsa. Mukubata nomurume wake nenzira yakananga, anofanira kuyeuka kuti “mudzimu wakanyarara nomunyoro . . . ndowoukoshi hukuru mumeso aMwari,” kwete chete mumeso omurume wake. (1 Petro 3:3, 4, NW; VaKorose 3:12) Zvakadini kana murume asiri mutendi? Angave ari kana kuti asiri, Magwaro anokurudzira vadzimai kuti “vade varume vavo, nokuda vana vavo, vave vakangwara, vakachena, vanochengeta imba, vanyoro, vanozviisa pasi pavarume vavo, kuti shoko raMwari rirege kumhurwa.” (Tito 2:4, 5) Kana nhau dzehana dzikamuka, murume asingatendi sezvingabvira zvikuru anoremekedza chimiro chendangariro chomudzimai wake kana chikapiwa “nounyoro nokutya.” Vamwe varume vasingatendi vaka“dzorw[a] nomufambire wavakadzi vavo pasina shoko rinorehwa, kana vachiona mufambire [wavo], wakachena pamwe chete nokutya Mwari.”—1 Petro 3:1, 2, 15; 1 VaKorinte 7:13-16.
19. Zvakadini kana murume achikumbira mudzimai wake kuputsa mutemo waMwari?
19 Zvakadini kana murume akakumbira mudzimai wake kuita chimwe chinhu chinorambidzwa naMwari? Kana ikoko kukaitika, anofanira kuyeuka kuti Mwari ndiye Mutongi wake mukurusa. Iye anorangarira somuenzaniso izvo vaapostora vakaita apo vakakumbirwa nezviremera kupunza mutemo waMwari. Mabasa 5:29 inorondedzera, kuti: “Zvino Petro navaapostora vakapindura, vakati: Tinofanira kuteerera Mwari kupfuura vanhu.”
20. Ndeipi iri nzvimbo inokosha umo rudo noruremekedzo zvinokosha?
20 Rudo noruremekedzo zvinokosha murumwe rutivi rweroorano—kurukurirano. Murume ane rudo achakurukura nomudzimai wake pamusoro pemibato yake, zvinetso zvake, mirangariro yake panhau dzakasiyana-siyana. Anoda ikoku. Murume anowana nguva yokutaura nomudzimai wake ndokuteerera chaizvoizvo izvo anotaura anoratidzira kumuda kwake nokumuremekedza. (Jakobho 1:19) Vamwe vadzimai vanonyunyuta kuti varume vavo vanopedza nguva shomanene zvikuru vachikurukura navo. Ikoko kunosuruvarisa. Chokwadi, munguva dzino dzokubatikana, varume vangashanda maawa akawanda kunze kwomusha, uye mamirire ezvinhu emari angaguma nokushandawo kwavadzimai. Asi varoorani vanofanira kuchengeterana nguva. Kukasadaro, vangava vakazvimirira pane mumwe nomumwe. Kungagona kutungamirira kuzvinetso zvakakomba kana vakanzwa vachisundwa kutsvaka ushamwari hunonzwira tsitsi kunze kwegadziriro yeroorano.
21. Kutaura kwakafanira kuchabetsera sei kuchengeta roorano ichifadza?
21 Nzira iyo vadzimai navarume vanokurukura nayo inokosha. “Mashoko, anofadza, . . . [a]notapira kumweya [a]chiporesa mafupa.” (Zvirevo 16:24) Mukwanyina angava mutendi kana kuti kwete, zano reBhaibheri rinoshanda, rinoti: “Kutaura kwenyu ngakuve nenyasha nguva dzose, kwakarungwa nomunyu,” ndiko kuti, kwakanaka. (VaKorose 4:6) Apo mumwe anenge ane zuva rakaoma, mashoko mashomanene omutsa, okunzwira tsitsi anobva kumukwanyina womunhu anogona kuita zvakanaka zvakawanda. “Shoko rinotaurwa nenguva yakafanira, rakafanana namatamba endarama mumidziyo yesirivha.” (Zvirevo 25:11) Chimiro chenzwi namashoko anosarudzwa zvinokosha zvikuru. Somuenzaniso, nomutoo wokushatirwa, wokurayira, mumwe angaudza mumwe wacho, kuti: “Vhara suo iroro!” Asi a“karungwa nomunyu” zvikuru kwazvo sei mashoko acho, akataurwa nenzwi rakaterama, rokunzwisisa, “Ungavhara suo here, ndapota?”
22. Zvimiroi zvendangariro izvo varoorani vanoda kuti vachengete kurukurirano yakanaka?
22 Kurukurirano yakanaka inobudirira apo kunenge kune mashoko, anotaurwa nounyoro, zvitarisiko zvakanaka nezviito, mutsa, nzwisiso, uye unyoro. Kupfurikidza nokushanda zvakaoma kuchengeta kurukurirano yakanaka, vose vari vaviri murume nomudzimai vachanzwa vakasununguka kuita kuti zvinodikanwa zvavo zvizivikanwe, uye vanogona kuva manyuko enyaradzo nebetsero kune mumwe nomumwe munguva dzokuora mwoyo kana kuti dzedzvinyiriro. “Taurai nenzira inonyaradza kumweya inodzvinyirirwa,” rinokurudzira kudaro Shoko raMwari. (1 VaTesaronika 5:14, NW) Kuchava nenguva apo murume anoodzwa mwoyo uye nguva apo mudzimai anodaro. Ivo vanogona ku“taura nenzira inonyaradza,” vachivakana.—VaRoma 15:2, NW.
23, 24. Rudo noruremekedzo zvichabetsera sei apo kunenge kune kusabvumirana? Ipa muenzaniso.
23 Vakwanyina veroorano vanoratidzira rudo noruremekedzo havasati vachizoona kusabvumirana kuri kwose sedenho. Vachashanda zvakaoma kusava “nehasha” nomumwe nomumwe. (VaKorose 3:19) Vose vari vaviri vanofanira kuyeuka kuti “mhinduro nyoro inodzora kutsamwa.” (Zvirevo 15:1) Ngwarirai kusazvidza kana kuti kushurikidza mukwanyina anodurura mirangariro yomwoyo wose. Panzvimbo pezvo, rangarirai kutaura kwakadaro somukana wokuwana kunzwisiswa kwemirangariro yomumwe. Pamwe chete, edzai kupedza misiyano ndokusvika pamhedziso inotsinhirana.
24 Yeukai nguva apo Sara akakarakadza kumurume wake, Abrahama, mhinduro kuchinetso chakati uye haina kuwirirana nemirangariro yake. Bva, Mwari akaudza Abrahama, kuti: “Uteerere Sara.” (Genesi 21:9-12) Abrahama akadaro, uye akakomborerwa. Nenzira yakafanana, kana mudzimai akakarakadza chimwe chinhu chakasiyana neicho murume wake anorangarira, anofanira kungoteerera. Panguva imwe cheteyo, mudzimai haafaniri kudzora kurukurirano asi anofanira kuteerera izvo murume wake anoda kutaura. (Zvirevo 25:24) Kuti murume kana kuti zvimwe mudzimai aomerere panzira yake amene nguva yose hakusi kuda uye hakuremekedzi.
25. Kurukurirano yakanaka ichabetsera sei mufarwa mumativi apachivande oupenyu hwokuroorana?
25 Kurukurirano yakanaka inokoshawo muvatano yavaroorani. Udyire nokushayiwa kuzvidzora zvinogona kukuvadza zvakakomba ukama ihwohwu hwapedyo zvikurusa muroorano. Kurukurirano yakajeka, pamwe chete neshiviriro inokosha. Apo mumwe nomumwe anotsvaka nenzira isina udyire garikano yomumwe, vatano haiwanzova chinetso chakakomba. Muna ikoku somuzvimwe zvinhu, “munhu ngaarege kuzvitsvakira zvake, asi zvomumwe.”—1 VaKorinte 7:3-5; 10:24.
26. Kunyange zvazvo roorano iri yose ichava nezvinoitika zvayo zvakanaka nezvakashata, kuteerera Shoko raMwari kuchabetsera sei varoorani kuwana mufarwa?
26 Shoko raMwari rinopa zano rakaisvonaka zvakadini! Chokwadi, roorano iri yose ichava nezvinoitika zvayo zvakanaka nezvakashata. Asi apo vakwanyina vanozviisa pasi pokufunga kwaJehovha, sokunoziviswa muBhaibheri, uye vachivakira ukama hwavo parudo rune nheyo noruremekedzo, vanogona kuva nechivimbo chokuti roorano yavo ichava inogara neinofadza. Ivo nokudaro vachakudza kwete bedzi mumwe nomumwe asiwo Muvambi weroorano, Jehovha Mwari.
IDZI NHEYO DZEBHAIBHERI DZINOGONA SEI KUBETSERA . . . VAROORANI KUFARIKANYA ROORANO INOGARA, INOFADZA?
VaKristu vechokwadi vanodana.—Johane 13:35.
VaKristu vakagadzirira kukanganwirana.—VaKorose 3:13.
Kune nhevedzano yakafanira youmusoro.—1 VaKorinte 11:3.
Kunokosha kutaura chinhu chakarurama nenzira yakarurama.—Zvirevo 25:11.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kiyi Mbiri Dzeroorano Inogara
fy chits. 3 pp. 27-38